IHolidu imemezela ukwethulwa kohlelo lwayo olusheshayo lwe-Android | Izindaba zamagajethi
IHolidu yethula uhlelo lwayo olusheshayo lwe-Android
U-Eder Esteban | | Android, Izaziso
Njengoba zethulwe ku-Google I / O yangonyaka odlule, siyabona ukuthi kanjani Izinhlelo zokusebenza ezisheshayo ziyatholakala. Sebephenduke okunye okuhle kuzicelo zendabuko, ikakhulukazi ngenxa yokusebenziseka kwazo kalula nokuthi akudingeki ukuthi zifakwe ocingweni. UHolidu wayefuna ukuba njalo enye yezinkampani zokuqala emkhakheni wezokuvakasha ukwethula uhlelo lwabo lokusebenza olusheshayo.
Uma kwenzeka ungazi Holidu, ingelinye lamapulatifomu wokuqashwa kwamaholide athandwa kakhulu namuhla. Ngenxa yakhe singakwazi thola amafulethi, izindlu zezwe nezinye izinhlobo zokuqashwa kwamaholide.
Manje njengoba sebethule uhlelo lwabo olusheshayo lwe-Android, inkampani ingenye yezokuqala emkhakheni wezokuvakasha ukwethula i-Instant App yayo ye-Android. Okuthile lokho kubanikeza inzuzo kunezinkampani eziningi ezikulo mkhakha. IHolidu inezizathu eziningi zokwethula lolu hlelo lokusebenza olusheshayo, ngoba babonile izinzuzo ezinikezwa yilolu hlobo lohlelo lokusebenza kubasebenzisi.
1 Uhlelo lokusebenza olusheshayo lwe-Holidu lwe-Android
2 Ungaluhlola kanjani uhlelo lokusebenza lwe-Holidu lwe-Android
Uhlelo lokusebenza olusheshayo lwe-Holidu lwe-Android
Ukukhethwa kwezicelo ezitholakalayo ze-Android namuhla kukhulu. Ngaphezu kwalokho, iyaqhubeka ikhula nsuku zonke. Ngakho-ke, abasebenzisi abaningi banqikaza ukufaka uhlelo lokusebenza efonini yabo, ngoba banomuzwa wokuthi kunezinto eziningi kakhulu ezifakiwe, ezithinta isikhala efonini futhi siyenze isebenze ngokunensa. Ngakho-ke, ukwethula uhlelo lokusebenza olusheshayo lwe-Android yisixazululo esihle.
Njengoba abasebenzisi bazokwazi ukujabulela izici eziyinhloko isicelo, ukusebenzisana okujwayelekile nayo, kepha ngaphandle kokuyifaka ocingweni. Ngakho-ke uzokwazi ukusebenzisa izinsizakalo zikaHolidu futhi uthole okuqashwayo endaweni yakho elandelayo yeholide, kepha ngaphandle kokufaka uhlelo lokusebenza efonini yakho. Kunethezeka ngokwengeziwe futhi ngaphandle kokuchitha isikhala sokugcina kudivayisi yakho ye-Android.
Isinqumo sikaHolidu sokuvula lolu hlelo lokusebenza olusheshayo senza umqondo obanzi kakhulu uma kubhekwa umkhakha inkampani engaphansi kwawo. Umkhakha wezokuvakasha kungenzeka ungomunye wemikhakha enesizini ephezulu kakhulu. Iningi lomsebenzi ligxile ezinyangeni ezithile ezithile. Ngakho-ke, uhlelo lokusebenza olunalezi zici akuyona into ezosetshenziswa njalo ngabasebenzisi. Ngakho ukuyifaka ocingweni akunangqondo kangako.
Manje, ngenxa yalolu khetho, inqubo ilula kakhulu. Umsebenzisi ngeke afake isicelo seHolidu efonini yakhe unyaka wonke. Kusukela manje kuqhubeke, lapho ufuna ukusebenzisa izinsizakalo ezinikezwa yinkampani, kuzofanele ukuthi ufinyelele usebenzisa i-Instant App. Ngakho-ke, ungasesha ukuqasha okufunayo ngeholide lakho futhi lapho uqeda ungaphuma kuhlelo lokusebenza. Ngale ndlela, ukufakwa kanye nenqubo elandelayo yokukhipha iyagcinwa uma ingasetshenziswa.
Ungaluhlola kanjani uhlelo lokusebenza lwe-Holidu lwe-Android
Kubo bonke abasebenzisi abanentshisekelo zama uhlelo, i-Instant App yenziwe yatholakala kubasebenzisi ku-Google Play Isitolo. Ukukwazi ukuyijabulela kuyinto elula kakhulu. Kumele ufake isitolo sohlelo lokusebenza samafoni futhi lapho, kunjini yokusesha, bhala uHolidu. Uhlelo lokusebenza inkampani etholakalayo luzophuma ngokushesha.
Lapho ufaka incazelo yakho, enye yezinketho eziphuma ukuthi "Zama manje". Vele uchofoze kuleyo nketho ukuze ukwazi ukujabulela uhlelo lokusebenza ngokujwayelekile, sengathi kufakwe ocingweni. Ngale ndlela ungasebenzisa ngokunenzuzo izinzuzo ezikunikezwa uhlelo lokusebenza bese uthola ifulethi noma indlu yasemakhaya obukade uyifuna ngentengo engcono, izaphulelo ezifika kuma-55% kwesinye isikhathi. Ngakho-ke kuyindlela enhle ongayibheka.
Lolu hlelo lokusebenza olusheshayo lweHolidu iyahambisana nawo wonke amafoni e-Android anenguqulo engu-5.0 nangaphezulu, okuyiningi labasebenzisi namuhla. Okwamanje itholakala sezizonke izilimi ezihlukene eziyi-11, kufaka phakathi iSpanish.
Kuyinto a isinyathelo sokubaluleka okukhulu kwengxenye yezicelo zokuvakasha ku-Android. Njengoba eziningi zalezi zicelo zisetshenziselwa isikhathi esilinganiselwe bese ziyakhohlwa uma isikhathi seholide sesidlulile, sithatha indawo enkumbulweni yethu singanakile. Ngenxa ye-Holidu Instant App singabekisa kalula indawo yethu yokuhlala yeholide. Ngakho-ke, sizosebenzisa uhlelo kuphela lapho siludinga ngempela. Ngakho-ke ngeke kuthathe isikhala ngokungadingekile kudivayisi yethu. Ucabangani ngalolu hlelo lokusebenza?
Uma unesifiso sokuzama, vele uye esitolo sohlelo lokusebenza le-Google Play Isitolo.
IHolidu: Okuqashwayo Ngamaholide nezindawo zokuhlala
Umthuthukisi: IHolidu GmbH
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » IHolidu yethula uhlelo lwayo olusheshayo lwe-Android
IGTV, lolu uhlelo olusha lwe-Instagram lokuncintisana ne-YouTube
Lesi yisikrini se-Samsung Galaxy Note 9